Vaovao an'ny orinasa | Runping
Ny 20 jona 2020 dia nanangana elanelana fitantanana orinasa sy famokarana orinasa ny orinasa hanatontosa fiofanana mandritra ny roa andro sy iray alina. Tamin'ny alàlan'ny hetsika isan-karazany, lasa ekipa iray izay afaka mifampatoky izahay, mahita zava-manahirana sy mamaha olana. Ny fikirantsika mba handresena ny olana dia novolavolaina. Takatsika fa tsy misy olona tonga lafatra fa ekipa tonga lafatra.
Amin'ny alàlan'ny fiofanana ivelany, ny tsirairay avy amintsika dia mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa, mpiara-miasa ary fiaraha-miasa amin'ny asantsika, ary mahatsapa fa ny fahavalo lehibe indrindra amin'ny fandrosoana dia ny tenantsika. Nandritra izany fotoana izany koa, nianatra ny fomba hifandraisana tsara amin'ny ekipa iray aho. Azontsika ampiharina ny zavatra nianarantsika tamin'ny asantsika ho avy.
Satria mpanamboatra fonosana vita amin'ny plastika sy boaty plastika lehibe lehibe any Sina, ary amin'ny maha mpitarika antsika ny indostria, tokony hanamafy ny finoan'ny orinasa sy ny filozofia isika: mpanjifa aloha, ary hiady miaraka amin'ilay tanjona mitovy.